← सहयोगको लागि अपिल
ट्रकको टायर मुनिवाट नयाँ जिवनको भिख माग्दा , आफनो कथा आफनै व्यथा →
आफनै कलम आफनै भाव कारवाही होला त विएण्डविलाई ?
वाहिर सुनिए जस्तो छैन यो अस्पतालमा सावधान सवारी दुर्घटनामा परि तपाँइको विरामी उपचारको लागी ल्याँदै हुनुहुन्छ भने किन कि तपाँईको विरामी जिउँदै पनि नर्फकन सक्छ । समिती तथा सवारी धनिहरुसंग मिलेर तपाँईको विरामीको ज्यान पनि लिन सक्छ । म यो पत्रिका मार्फत सवारी दुर्घटनामा परी उपचारमा आउने विरामीहरुको जिवन भने यो अस्पतालमा जोखीमै रहेको ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु । विभिन्न समिती मार्फत दुर्घटना भई आउने विरामीहरुको उपचार गर्न यो अस्पतालले समितीहरुसंग सम्झौता समेत गरेको छ । जस्को आर्थीक प्रलोभनमा परि अस्पतालले विरामीलाई मार्न समेत पछि पर्दन् । सो अस्पतालका प्रमुख वैद्य र वास्कोटा यसको दोसी होलान, नहोलान तर अस्पतालका उनकामातहतका डाक्टरहरु भने पैसामानै विकेर मानिसको हत्या समेत गर्न पछि पर्नेवाला छैनन् । तर अव उनिहरु पनि यस विषयमा चनाखो भएनन भने भोली पिडीतहरुले विएण्डवि अस्पताललाई घेरा वन्दी गरि जलाउन समेत पछि पर्ने छैनन् । यो अस्पतालवाट पिडीत भएका हजारौ व्यक्ति मध्य म पनि एक हुं सायद त्यसको नेतृत्व म आफैले पनि गर्न पछि पर्ने छैन् । के विरामीको भविश्य वर्वाद गर्ने विएण्डविले उनिहरुको पहिलाको खुसी र्फिता गर्न सक्छ ? मेरो प्रश्न विएण्डविलाई के अव तिमीहरुको गल्तीले सदाको लागी गुमेको मेरो गोडा र्फिता दिन सक्छौ ? यदि उपचार गर्न सक्छौ भने गर हैन भने आर्थीक प्रलोभनमा परेर मानिसको भविश्य वर्वादमा भने नपार मेरोे तिमीहरुलाई सुझाव छ ।
दुर्घटना कसरी भयो त ?
लागौ मुख्य कुरा तर्फ गएको जेष्ठ ३१ गते राजधानीको वालाजुमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटना पश्चात मेरो उपचारको लागी परिवारले विएण्डवि अस्पताल लगेका थिए । ना२ख ८६२९ नम्वरको ट्रकले वा३१प १८२१ नम्वरको मेरो मोटरसाइकललाई उछिनेर अगाडी वढने क्रममा सो ट्रकको अगाडीको भागले मेरो मोटरसाइकलको पछाडी वस्ने विमला धिताल शरिरमा छोएर तान्यो । अनि उनि चिच्याउन पुगिन म केहि अगाडी पुगेर रोकेर हेर्नमात्र के लागेको थिए सो ट्रकले पुन हामीलाई आएर सिधै ठक्कर दियो । त्यस पछि म धेरै अगाडी पुगेर वजाँरीए भने विमला म भन्दा पछाडी बजारीन आइपुगिन त्यस पछि सो ट्रकले पुन हामीतिर हुँइकिएर आयो म अताँसिए र चिच्याए पनि तर निर्दयी सो ट्रकले विमलाको भुडिमा कुल्चीयो भने मेरो गोडामा कुल्चीयो । त्यसपछि पुन हामीलाई गाडीको चक्का मुनि तानेर राख्न लाग्दा म चिच्याएको सुनेर सडकमा हिडने पैदलयात्रीहरुले हामी दुवैलाई वचाए ।त्यस पछि मोटरसाइकलको पछाडी रहेकी विमला धिताल र म गम्भीर घाइते भयौ भने मोटरसाइकलको विचमा रहेकी वालीका व्रजिना वास्कोटा भने सामान्य घाइते मात्र भइन् । दुर्घटनाको समय देखि अस्पताल सम्म पुर्याँउदा सम्म विमलाको पुरौ होस थियो । तर टिचिङहुदै पुन विएण्डविमा पुरउदा भने उनको होस थिएन् उनि वेहोस थिईने भने म अर्धवेहोस अवस्थामा थिए । उपचारको क्रममा मलाई इन्फेक्सन भएको संका लागेर म भने मेडिकेयर अस्पतालमा आएँ विमलालाई सोही अस्पतालमा राखी उपचार भईरहेको थियो तर विडम्वना उनको भने उपचारको क्रममा निधन भएछ । हामी संगै दुर्घटनामा परेकी वालिका व्रजिना भने सकुसल घर र्फकिएकी छन् ।
एम्वुलेन्स समेत र्फकाए
डिस्चार्ज गरेर मलाई मेडिकेयर लाने कुरा भएपछि अस्पतालको कर्मचारीहरुले एम्वुलेन्स प्रयोगको लागी आग्रह गर्दा समेत मानेन । २०६६ साल असार ६ गते रातको ८ वजेको थियो त्यस दिन राती भएकाले पनि मेरो परिवारहरु आँतीएका थिए कसरी मेडिकेयर सम्म पुरउने भनेर त्यस पछि वाहिरी एम्वुलेन्सलाई खवर गर्दा अस्पतालको अन्डरग्राउण्डमा रहेका कर्मचारीहरुले आउने एम्वुलेन्सहरुलाई धम्काँउदै र्फकाउने गरेका रहेछन् पछि वल्ल वल्ल अर्को प्राइभेट एम्वुलेन्सलाई वोलाएर मलाई मेडिकेयर लगियो ।
खुट्टा वा मानिस रोज्नु पर्ने अवस्था
त्यस वेला वेलुकीको साँडे ८ भइसकेको थियो । जव मेडिकेयर अस्पताल पुगियो त्यस वेला सम्म मेरो गोडा केहि हुने अवस्था छैन भन्नेमा म ढुक्क थिए । अस्पतालको गेटमा हाँसीलो अनुहारमा विरामीको स्वागत गर्न वस्नु भएको वरिष्ठ डा. चक्रराज पाण्डेको स्वागतले मेरो दुखाईलाई हद सम्म भएपनि कम गर्न मद्धत मिलेको थियो । जव उहाँले मेरो घाउ हेर्नु भयो त्यस पछि मेरो शरिरमा इन्फेक्सन भएको र तत्काल गोडा नकाटेमा ज्यान समेत नरहने वताएपछि मेरो जिवनमा अर्को उत्पात सुरुभयो । मेरो परिवारले उपचारको लागी नेपालमा नभए विदेशमा लगेर पनि उपचार गराउने वताए पनि डा पाण्डेले त्यो ढिला भइसकेको वताउनु भयो । विएण्डवि का डक्टरहरुले दुर्घटना पछि मेरो गोडामा रहेका धुलो तथा अन्य फोहोर पदार्थ राम्रोसंग सफा नगरेकाले त्यसले गर्दा भित्र पटिवाट इन्फेक्सन सुरु भईसकेको रहेछ । जस्ले गर्दा किड्नी तथा शरिरका अन्य भागमा समेत रोगका किटाणुहरु फैलिसकेको रहेछ । डा पाण्डेले अचानक अव गोडा काट्नुपर्ने वताउनु भयो । म त्यो खवरले यति धेरै दुखि भएकी मेरो जिवनमा सायद यो भन्दा वढी दुख कहिल्यो पनि पर्ने छैन । पाण्डेले मलाई धेरै कुरा भनेर सम्झाउनु भयो । अन्ततह गोडा काटेर भएपनि आफुले वाँच्ने निर्णय गरे अनि २०६६ साल असार ६ गते मेरो दाहिने गोडाको घुडा देखि तलको भाग सदाको लागी गुमाउनु पर्यो ।
अहिलेको मेरो अवस्था अझ झनै कम्जोर हुदै गएको छ । दुर्घटना पश्चात भएको चोटहरु र काटीएको खुट्टा निको हुने भएपनि अझै नियमीत फिजीयो थेरापी गरिरहेको छु । खुट्टा राम्रोसंग फोल्ड गर्न तथा सिधा हुन समस्या भएकाले फिजीयो थेरापी गरिरहेको छु भने डक्टरको सल्लाह अनुसार अस्पताल पनि गइरहेको छु । मेरो उपचारको लागी सवारीसाधनको तर्फवाट ११ लाख रुपैया तिरेको भएपनि अन्य ४ लाख रुपैया जति मेरो परिवारको तर्फवाट खर्च भईसकेको छ । साथै कृतिम गोडा राख्नको लागी पनि डक्टरको सल्लाह अनुसार अझै ३ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । दुर्घटना पश्चात अपाङ् जिवन विताउन त वाध्य भएको छु भने आर्थीक रुपले पनि मलाई समस्या परेको छ । अस्पताल जाँदा प्रत्यक पटक ३ हजार भन्दा वढी खर्च हुने गरेको छ भने अन्य खर्च समेत हुने गरेको छ । दुर्घटना अघि मैले चलाँउदै आएको मासिक पत्रिका अग्निबाँण भने वल्ल प्रकाशन हुन लागेको छ । आय आर्जन गर्ने परिवारको म जेठो छोरा भएका ले मेरो परिवारको मेरो दुर्घटनाले थप वोझ थपेको छ ।
One response to “आफनै कलम आफनै भाव कारवाही होला त विएण्डविलाई ?”
जुन 14, 2010 at 9:22 बिहान
aba doctor haru lai samanyataya hami kaliyug ko deuta nai manchhau aba deuta nai bhakchhak bhaye chhi kasko ke lagchha,yo sansar ma manbta,manchhe ko bibek sidhhidai gayeko jasto lagchha….anyway May god bless u, hope u come out soon…